अर्थ संसार: 4/1/12 - 5/1/12
व्यक्तिगत तथा व्यापारीक कर्जा असुलीमा समस्या
न्यायाधिकरणमा ९ महिनामा ५३ मुद्दा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत तथा व्यापारीक शिर्षकमा गरेको कर्जा असुलीमा समस्या देखिन थालेको छ ।
बैंकहरुले व्यक्तिगतका साथै साना उद्योग, व्यापार, पसल संचालनलगायतको प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको कर्जा नउठेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा यससम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् ।
बैंकहरुको खराव कर्जा असुली गर्दै आएको न्यायाधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५३ वटा मुद्दा दायर भएका भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत र व्यापारीक शिर्षकमा लिएका कर्जा भएको न्यायाधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् ।
“चालु आवका अधिकांश मुद्दा पसल संचालन गर्न, उद्योग चलाउनका साथै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका कर्जा छन्” न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार रुद्र प्रसाद सुवेदीले बताए । उद्योग व्यापारमा मन्दी आएका कारण स–सानो व्यक्तिगत कर्जामा समेत समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा तथा हाउजिङ कर्जामा समस्या देखिने अनुमान गरिए पनि यससम्बन्धी मुद्दा न्युन परेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । चैतसम्म परेका मुद्दामध्ये २ वटा मात्र घरजग्गाका छन् ।
१ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेको मुद्दामा ८२ करोड रुपैयाँ माँग दावी गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी एसबिआइ तथा लुम्बिनी बैंकका ९÷९ वटा मुद्दा रहेका छन् । यसैगरी एनबि बैंकले ७ वटा र एसबिआईका ६ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
आव २०६७÷०६८ मा ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा सो हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले चालु आवको मुद्दा अघिल्लो वर्षको तुलनमा धेरै हुने न्यायाधिकरणका अधिकारीको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आव २०६६÷०६७ मा दोब्बर बृद्वी भई ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत आवका मुद्दामध्ये आधा हायर पर्चेज कर्जाका थिए ।
Posted by Yadav Humagain at 1:30 AM
भन्सार नबढ्दा सुनमा दैनिक २० लाख राजस्व घाटा छ
२०२२ सालमा एसएलसी पास गरेपछि आफ्नै पसलमा सुनचाँदीको कालिगढीको काम गर्ने तजरत्न शाक्य विगत ११ वर्षदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको अध्यक्ष छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०२७ मा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका शाक्य त्यसै वर्षदेखि पूर्ण रूपले सुनचाँदीको काममा खटिएका छन् । सानो छँदा घण्टाकर्णको समयमा काम गरेबापत पैसा आउने लोभमा काम सुरु गरेको उनी अन्ततः यसै व्यवसायमा पूर्ण रूपले क्रियाशील रहे । २०५८ बाट लगातार चौथो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका उनी पछिल्लो समयमा खुलेका सुनचाँदीसँग सम्बन्धित सबै संस्थालाई एकीकृत गरी महासंघ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । एक वर्षभित्र सबै समेटेर महासंघ बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेका शाक्य केही समययता भन्सार दरका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन महँगो भएकाले झन्डै आयातित सुनमध्ये आधा भारत नै गएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ
दैनिक २० किलो आयात भइरहेको छ । बजारमा पनि अभाव छ भनिन्छ, यति धेरै सुन कहाँ खपत भइरहेको छ ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले २०६७ वैशाखमा गरेको अध्ययनमा देशभर दैनिक औसत ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विवाहको मौसम वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ तथा फागुनमा र तीज, दसैं, तिहारजस्ता मुख्य चाडबाडको समयमा अझ सुनको माग बढी रहेको पाइन्छ । तर, हाल दैनिक २० किलो मात्र आयत भएको छ । त्यो पनि फागुनदेखि मात्र ५ किलो कोटा बढेको हो । यसअघि त अझ १५ किलो थियो ।
सुनको भाउ अकासिएसँगै आममानिसको पहुँच सुनमा छैन । नेपालीको वार्षिक आय ४४ हजार छ । तर, सुन तोलाको ५५ हजार हाराहारीमा छ । यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा गरगहनाको बिक्री घटिरहेको छ । तर, आयातित सुन कता गयो र कसरी खपत भइरहेको छ भन्ने रहस्यमय नै छ ।
आखिर सुन व्यवसायीहरूमार्फत नै बजारमा जाने हो । अनि तपाईंहरूलाई थाहा हुँदैन त सुन कहाँ खपत भईरहेको छ ?
पछिल्लो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा सुन नेपालमा खपत मात्र भएको छैन, चुहावट पनि भएको छ । दुई वर्षअगाडि भारतमा सुनको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ३ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) हँुदा नेपालमा प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँमात्र थियो । भन्सारका कारण ठूलो परिणाममा सुन आयात भई भारततिर निकासी भयो । यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तर घाटामा देखियो । त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु ग¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गर्दा राजनीति गरेर सुनचाँदी व्यवसायीहरूको व्यवसायीक संरचनालाई ध्वस्त बनायो । सुन बिक्री गर्ने थोक विक्रेताको भूमिका हटाइदियो भने अध्ययन नै नगरी कोटा प्रणाली पनि लागू ग¥यो । यसले सुन बाँडिँदा पनि समस्या देखिएको हो ।
तीन महिनादेखि बजारमा सुन अभाव छ । गत मार्चमा भारतले भन्सार दर वृद्धि गरी ५ सय ४० भारुबाट १ हजार ८० पु¥यायो । यसले नेपालमा भन्दा भारतमा २ सय २८ रुपैयाँ सुन महँगो भयो । भारतमा मूल्य बढी आउँदा सुन भारततिर गएकाले नेपालमा भने यसको अभाव देखियो । सुनचाँदी व्यवसायी संघले भन्सारदर समायोजन गरी १ हजार ५ सय बाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । तर, अझै भन्सारदर समायोजन भएको छैन । यसले सुनको अवैध कारोबारलाई प्रस्रय दिइरहेको छ ।
एक किलो सुन ५० लाखमा किनेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दा पनि ४०÷४५ हजार फाइदा हुन्छ । त्यो सुन भारत लैजाँदा भने १ लाखभन्दा धेरै नाफा हुन्छ । हुन्डीको भाउ पनि बढेको र नेपालमा भारुको अभावका कारणले भारुका लागि सुन त्यसतर्फ गइरहेको छ । ठूला भारतीय र नेपाली व्यापारीको मिलेमतोमा यस्तो चलखेल भइरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यापारीले मात्र प्रतिव्यवसायी १ किलोसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यापारीले कसरी चलखेल गर्न सक्छन् ?
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीले मात्र सुन पाउँछन् । तर, सुनचाँदी व्यवसायीकै केही संगठनले गरैव्यवसायीलाई पनि सदस्यता दिएकाले समस्या भएको छ । बैंकहरूले त कम्पनीको कागजात हेरेरै सुन दिने हो । उनीहरूले संस्थाको वैधानिकता मात्र हेर्छन् । अर्कोतिर बैंकहरूको सुन बिक्री प्रणाली पनि पारदर्शी छैन । बैंकहरूमा पनि ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा सुन पाउन सक्ने स्थिती विद्यमान छ । ठूला व्यापारीले धेरै सुन उठाएर केही बजारमा पठाउने बाँकी भारततिर अवैध रूपमा पठाउने गरेका छन् । सामान्यतया ११ बजेसम्म बैंकहरूको फोन व्यस्त हुन्छ । तर, १२ बजे सुन सकियो भन्ने उत्तर बैंकहरूले दिन्छन् । यसबाट पनि सुन बिक्रीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हालै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘अनलाइन’बाट सुन बिक्री गर्न थालेको छ । यसले बिक्री प्रणालीमा केही सुधार देखिए पनि अझै पारदर्शी नहुने सम्भावना छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी नमिली त यो सम्भव छैन नि ?
नेपाली र भारतीय व्यापारी मिलेर चलखेल भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीको संगठनमा आबद्ध नभई सुन पाइँदैन । तर, केही संगठनले भारतीय व्यवसायीलाई पनि सदस्यता दिएकाले समस्या आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले नेपाली नागरिक नभई व्यवसायीको सदस्यता दिएको छैन । संघले जिल्ला शाखालाई पनि वास्तविक व्यापारीलाई मात्र सदस्यता दिन निर्देशन दिएको छ ।
सुनको चोरी पैठारीको उपयुक्त नियन्त्रण कसरी हुनसक्छ ?
अहिलेको मुख्य समस्या भन्सारदरको अन्तर हो । चुहिने ठाउँ देखिएपछि त्यसलाई टाल्नुपर्छ । भन्सार बढाए सुन भारत जान सक्दैन । यसले सरकारी राजस्व पनि बढ्छ । अहिले सुनको भन्सार नबढाउँदा दैनिक २० लाख राजश्व सरकारलाई घाटा भइरहेको छ । नेपालमा २० किलो सुन दैनिक ल्याउने प्रावधान छ । प्रति १० ग्राम १ हजार भन्सार दर बढ्दा २० किलोमा २० लाख रुपैयाँ भन्सार घटिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले सयबारे समयमै सोचेर भन्सारदर बढाएमा राजस्व मात्र बढ्दैन सुनको अवैध कारोबार रोकिन गई शोधनान्तर बचतलाई सघाउ पु¥याउँछ । त्यसैगरी ओजीएल (ओपन जनरल लाइसेन्स) प्रणालीमार्फत बैंकसँगै व्यवसायीलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा भई बजार सहज हुन्छ । नेपालको आन्तरिक बजारलाई आवश्यक परिमाणमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । भन्सार दर बढाएर सुन व्यवसायीहरूलाई पनि आयात गर्न दिने हो भने धेरै समस्या आफँै हल हुन्छ । सुनचाँदी व्यवसायी संघले मात्र सुनको भन्सार बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।
अहिले कति सुन भारत गइरहेको होला ? तपाईंहरूको अनुमान के छ ?
बजार बुझ्दा र साथीहरूको कुरा सुन्दा कुल आयातमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशत सुन भारततर्फ गइरहेको छ ।
महँगो पहेंलो धातु कहिलेसम्म अत्यावश्यक वस्तु भनेर आयात गरिरहने ?
धार्मिक कारणले नेपालीका लागि जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुन आवश्यक हुन्छ । २०६२ सालभन्दा अगाडि आयातित सुनमध्ये ९५ प्रतिशत गरगहना बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो । सुन नेपालीका लागि सुखमा लगाउने गरगहना र दुःखमा गर्जो टार्ने साधन हो । आपत्कालीन अवस्थामा छिटै नगदमा बदल्न सकिने भएकाले सुनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, २०६२ पछि लगानीका अन्य क्षेत्रहरू घटे । सेयरबजार ओरालो लाग्यो । दसैं–तिहारमा समेत पर्याप्त रकम दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको जनमानसमा विश्वास घट्यो । त्यसैगरी घरजग्गाको कारोबार पनि ओरालो लाग्यो । मजदुर र विद्युत्लगायतका समस्याले उद्योगधन्दा धराशायी भयो । सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनमा लगानी बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सुनको लगानीमा आकर्षण बढिरहेको छ । २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको ‘ट्विन टावर’ आक्रमणपछि डलर कमजोर भएसँगै बैंकहरूले आफ्नो सञ्चित कोषमा सुन खरिद र सञ्चय गर्न लागे । यसले सुनको माग ह्वात्तै बढायो । युरोपेली देशले समेत आर्थिक संकट टार्न सुन प्रयोग गरे भने नेपालजस्तो देशमा आकर्षण नहुने कुरै भएन ।
हाल नेपालमा ३० प्रतिशत सुन लगानीका रूपमा र गहनाका लागि ७० प्रतिशत खपत हुन्छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम पनि बचत र अप्ठेरोमा गर्जो टार्न सुन किन्न प्रयोग भएको छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो । त्यसैले एक–दुई तोला सुन खरिदका लागि नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।
ढिक्का सुन बेच्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि कारोबार त भइरहेकै छ नि ?
राष्ट्र बैंकले सुन गरगहना बनाएर मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अव्यावहारिक भएकाले लागू हुन सकेको छैन । व्यापारीले आफ्ना ग्राहकलाई चिनजानका आधारमा दिनुपर्छ । यस्तो कुरा नीति नियम बनाउनु अघि नै सोच्नुपथ्र्यो । किलोका किलो सुन किन्ने प्रवृत्तिलाई अरू कुनै कानुनबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक–दुई तोला सुन किन्न नपाउने व्यवस्था भने अव्यावहारिक नै हो ।
सुनचाँदी व्यवसायी आफैं सुन धितो राखेर गैरकानुनी रूपमा ऋण दिने गर्छन् नि ?
कानुन पल्टाएर हेर्दा त यो गैरकानुनी हो । तर, सुनचाँदी व्यवसायमा परम्परागत रूपमै यस्तो काम हुँदै आएको छ । धितो लिने र ऋण दिने व्यवस्थाको जन्मदाता नै सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । पसलमा कारोबार गर्न सजिलो भएका कारण अझै पनि गाउँघरमा यो प्रचलन कायम छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
चार–पाँच वर्षअगाडि वाणिज्य विभागले परिपत्र जारी गरी बैंकिङ कारोबार गर्नेलाई बैंकिङ प्रणालीमा जान अनुरोध गरेको थियो । त्यतिबेला देखिनै संघले आफ्ना सदस्यलाई जानकारी र सचेत गराउँदै आएको छ । संघले हरेक वर्ष सूचनामार्फत यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । अहले बैंक तथा वित्तीय संस्था बढेपछि यो काम घट्दै गएको त छ तर निमिट्यान्न भएको छैन । बैंकहरूले पनि सुन धितो कर्जा सुरु गरिसकेका छन् ।
विगतका घटनाक्रम हेर्दा सुनचाँदी व्यवसायी बढी असुरक्षित देखिएका छन् । यसको कारण के हो र सुरक्षा विधि कसरी तय गर्नुभएको छ ?
सुनको मूल्य बढेपछि सुनचाँदी व्यवसायी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । एकातिर भाउ बढेपछि ग्राहकले सुन किन्न नसक्दा व्यापार घटेको छ भने अर्कातर्फ सुन महँगो भएकाले अपराधीको निसानामा परेका छौं । एक तोलाको सिक्री लुट्ने बित्तिकै ५० हजार आउने भएपछि लुटेराहरू पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुन चोरी, डकैती हुँदै आजकाल गिरोह बनाएर नै सुनचाँदी व्यवसायीलाई लक्षित बनाएर अपराध हुन थालेका छन् । केही समयअघि पुल्चोकको घटनापछि प्रहरी प्रशासनले पनि केही तदारूकता देखाएको छ । व्यवसायी र प्रहरीबीच पारस्पारिक सम्बन्ध बढेको छ र सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ । यसबाहेक संघले व्यावसायिक फर्महरूलाई आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत सुरक्षामा खर्च गर्न आग्रह गरेको छ ।
बिमा गरेर सुरक्षित रहने विधि उपयोग भएको त देखिँदैन । किन ?
यसबारे संघले अध्ययन गरेको हो । तर, नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायीले बिमाशुल्क महँगो भएको अनुभव गरेकाले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन् । यो व्यवसायमा धेरै न्यून र मध्यमवर्ग संलग्न छन् । पछिल्लो समयमा भारतीयहरूले करोडांै लगानीमा पसल खोलेका हुन् । एउटा आरन र चिम्टा लिएर काम सुरु गर्ने नेपालीहरू यद्यपि छन् । पहिलेका व्यवसायीहरू ग्राहकले ल्याएको सुनबाट गहना बनाएर ज्याला खाएर बस्ने गर्थे । अब अवस्था परिवर्तन भएको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण तयारी (रेडिमेट) गहना आवश्यक भएकाले केही पुँजी नलगाई व्यवसाय सुरु गर्ने स्थिति छैन । प्रदर्शनी गरेर राख्नुपरेकाले आपराधिक व्यक्तिको निशानामा सुन व्यवसायी पर्न थालेका छन् । ५० लाख रुपैयाँको बिमा गर्दा ४०–५० हजार बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ । जुन अहिलेकै व्यवसायमा सम्भव छैन । तर, सुपरमार्केटका ठूलठूला पसलले बिमा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बिस्तारै बिमाको विकल्प नहुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
संघले तोकेको भाउअनुसार बिक्री गर्नुपर्छ । तर, प्रचारप्रसार हेर्दा त त्यो सम्भव देखिँदैन । ठूला पसलहरूको वास्तविकता के हो ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विनियम दरले गुणन गरी त्यसमा भन्सार तथा बैंक र व्यापारीको १–१ प्रतिशत नाफा जोडेर बजारभाउ तय गरिन्छ । त्यही आधारमा सबै व्यवसायीले कारोबार गर्नुपर्छ । थोरै मार्जिन हुने सुनजस्तो व्यवसायमा ठूला पसलले कसरी खर्च धानेका छन्, रहस्यमय छ । यसबारेमा उपभोक्ता आफंै सचेत हुनुपर्छ । कसैले अनावश्यक लाभ देखायो भने त्यो सम्भव छैन । त्यसमा गडबडी छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एक तोला सुनमा २ हजार १ सय रुपैयाँ छुट या दुई तोला चाँदी भनेर विज्ञापन पनि देखियो तर यो सम्भव छैन भनेर हामीले उपभोक्तालाई सचेत गराएका छौं ।
सुनचाँदी ‘डबल वे ट्राफिक’ हो । संघले तोकेको भाउमा बेच्ने मात्र होइन किन्नु पनि पर्छ । धेरै लोभ देखायो भने त्यसमा गुणस्तरीयता हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । गरगहना बेच्दा १० प्रतिशतभन्दा थोरै बढी रसायन कटौती ग¥यो भने त्यसमा गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
काठमाडौं, १० वैशाख
सहकारी क्षेत्रबाट उठ्ने करबाट ‘सहकारी विकास कोष’ स्थापना गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । आफूले तिरेको करबाट सहकारी क्षेत्रकै विकास र प्रवद्र्वनमा खर्च गरी यसको दिगो विकासका लागि कोष आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आइतबार कर कार्यालय ललितपुरमार्फत सरकारलाई सुझाव पठाउँदै ललितपुरका सहकारीकर्मीले आफूले तिरेको कर आफ्नै क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न आग्रह गरे । जिल्ला सहकारी संघसहित ६ वटा विषयगत संघले संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न १० बुँदे माग राखिएको छ । मागमा सहकारीको आयकरमा क्षेत्रगत आधारमा छुट, लाभांश कर हटाउन, विषयगत संघहरूको कर छुट गर्न, पान नम्बर नलिएका सहकारीलाई दर्ता गर्नका लागि लाग्ने जरिवानमा छुट गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी जोखिम बेहोर्ने कोष व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सीमित कारोबार गर्ने सहकारी सरहको सहुलियत दिन माग गरिएको छ ।
एक सातासम्म विभिन्न सहकारी संघसंस्था तथा सहकारीकर्मीहरूसँग छलफल गरी सुझाव बुझाइएको जिल्ला बचत तता ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि कर कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद चुडालले सहकारीकर्मीको सुझाव माथिल्लो निकायसमक्ष पु¥याउने बताए । सहकारीमा लाग्दै आएको करबारे पुनरावलोकनका लागि हाल छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सेयर लगानीकर्ताद्वारा आन्दोलन घोषणा
सरकार तथा नियामक निकायसमक्ष विभिन्न माग राख्दै सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
लगानीकर्ताका ३ वटा संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र जनरल इन्भेस्टर्स एसोसिएसनले बुधबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो माग पूरा नगरे अनिश्चितकालीन सेयर कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिए । विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले वैशाख ३ गतेदेखि चरणबद्व आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाउने, लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कर्जाको ब्याज तिर्न, मार्जिन तिर्न तथा सेयर बिक्री गर्न जबर्जस्ती गर्ने वित्तीय संस्थामा सामूहिक रूपमा खबरदारी गर्ने रहेको छ । यसैगरी दोस्रो चरणमा कालोपट्टी बाँधेर नियामक निकायमा धर्ना दिने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै अनिश्चितकालसम्म सेयर खरिदबिक्री नगर्नेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले नियामक निकायहरूसमक्ष मार्केट रिक्यु फन्ट तुरुन्त स्थापना गरी बजारमा लगानी गरी बजार सुधार गर्नुपर्ने, लगानीमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाइ स्वघोषणाका आधारमा खरिद गर्न पाउनुपर्ने, ब्रोकर जमानीमा सेयर खरिदकर्जा पुनः सुरु गर्नुपर्नेलगायतका १३ सुत्रिय माग राखेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव राजकुमार तिमिल्सिना, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका महासचिव प्रकाश रजौरे र जनरल इन्भेस्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्कीले लगानीकर्ताको मागलाई तत्कालै सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नसमेत तयार रहेको चेतावनी दिए ।
दुई वर्षदेखि पुँजीबजार सुधार्न लगानीकर्ताहरूले गरेको मागलाई बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । आफूहरूको माग बेवास्ता गर्दा पुँजी बजारको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको दाबी गर्दै त्यसको रक्षाका लागि आन्दोलन बाध्यता भएको लगानीकर्ताले बताए ।
Posted by Yadav Humagain at 12:55 AM
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा परेन
कार्यान्वयन समिति नै निष्क्रिय
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ मनाउन सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरू निष्क्रिय भएका छन् ।
माघको दोस्रो साता काठमाडौं खुल्लामञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ को उद्घाटन गरिएको मा सहकारी वर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्न बनाइएका समितिहरू निष्क्रिय भएपछि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सहकारी वर्षलाई भव्य बनाउन सरकारले राष्ट्रिय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्म समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष छन् । समितिको सदस्यसचिवमा कृषि सचिव छन् ।
गठन भएको करिब ६ महिनाको अवधिमा समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ । पहिलो बैठकले सहकारी वर्षका कार्यक्रम पारित गरे पनि त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन । समितिले सहकारी विभागमा राखेको सचिवालय पनि कर्मचारी अभावमा एक महिनायता बन्द छ ।
ढुकुटीमा साढे ४ अर्ब कारोबार
पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौंमा २ हजारभन्दा बढी ढुकुटी समूह
केही सहकारीकोले पनि ढुकटीमा ऋण लगानी गरेको अनुमान
देशभर मौलाएको ढुकुटीमा करिब ४ अर्ब ५० रुपैयाँ कारोबार भइरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार पोखरा केन्द्र रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ढुकुटी कारोबार हुने गरेको छ । तराईमा भने यसको प्रभाव न्यून छ ।
ढुकुटी गैरकानुनी लेनदेन भएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई यो अध्ययन प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ । केही दिनअघि बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले यो अध्ययन सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन केही परिमार्जन गरेर प्रतिवेदन दिने निर्णय बैठकको थियो ।
पोखरालगायत केही क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले पनि ढुकुटीको निगरानी गरिरहेका छन् । ढुकुटीबारे सरकारले पनि अध्ययन गरेको थियो, जसमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा मात्र २ हजारभन्दा बढी ढुकुटी सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यस्तो कारोबार बन्द कोठामा गोप्य रूपले हुने भएकाले पत्ता लगाउन गाह्रो हुने बैंकले जनाएको छ । पोखरालगायत मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुकुटी खेल्ने र खेलाउने अत्यधिक छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट ढुकुटी सुरु भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेसँग सम्पर्क राखेर अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बुधबार ढुकुुटी गैरकानुनी भएकाले यसमा नलाग्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेका थिए । यस्तो कारोबार गैरकानुनी भएकाले कारबाही हुने चेतावनी उनको थियो ।
गत वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा नोट, तरलता अभावलगायतका समस्याले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेपछि ढुकुटीलगायतका गैरबैंकिङ कारोबार फस्टाएका हुन् । सहकारीपछि ढुकुटी कारोबार सजिलो हुँदा यो बढेको हो ।
दुई वर्षअघि घरजग्गा मूल्य अध्यधिक बढेकाले पनि ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेलाई प्रोत्साहन भएको थियो । केही सहकारीले ढुकुटीमा ऋण लगानी गरेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।
दिन दुईगुणा रात चारगुणा कमाउन थालेपछि धनाढ्य परिवारदेखि सर्वसाधारणसम्म ढुकुटीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यस्तो कारोबारमा नियमित रेमिट्यान्स आइरहने समुदाय बढी सक्रिय छन् । ठूलो संख्यामा महिलाहरू समेत ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेमा संलग्न भएको भेटिएको छ । “तर, अगाडि महिला देखिए पनि पछाडि पुरुष नै छन्,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
अध्ययनमा एकै व्यक्तिले सात वटासम्म ढुकुटी खेलेको भेटिएको छ । एउटा ढुकुटीको पैसा तिर्न अर्कोमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो भएको अनुमान छ ।
हाल तीन प्रकारका ढुकुटी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । पहिलो– घटेर पैसा लिने, दोस्रो– पैसा लिई ब्याज तिर्ने र तेस्रो– आलोपालो पैसा लिने छन् । घटेर पैसा लिने एक प्रकारको जुवा नै भएको ती अधिकारीले बताए । केही ढुकुटीको कारोबार बढ्दै गएकाले एकाउन्टेन्ट राखेरसमेत हरहिसाब गरेको भेटिएको छ ।
पहिलो ढुकुटी खानेले पछि पैसा नतिर्ने, खेलाउने मूली गायब हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । यसले आर्थिकलगायत सामाजिक विकृति पनि बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । केही साताअघि मात्रै एक महिलाले ढुकुटी खेलाउँदा समस्या भएपछि तनावका कारण प्रहरी हिराशतमै आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
Posted by Yadav Humagain at 6:12 AM
९३ सहकारीलाई ३ करोड अनुदान
सरकारले कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगका ९३ वटा सहकारीलाई करिब ३ करोड अनुदान दिएको छ ।
बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभाग योजना शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णु घिमिरेले तीन वर्षमा ९३ वटा सहकारीलाई २ करोड ७० लाख अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
अनुदानमध्ये ५० प्रतिशतले दुग्ध चिस्यान केन्द्र चलाएको र बाँकी चिया तथा कफी, तेल, चामल, मसला, महलगायतका कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगमा लगानी भएको घिमिरेले बताए । तर, अनुदानबाहेक सहकारीले थप लगानी नगरेकाले ठूलो परिणाममा उत्पादन नभएको उनको भनाइ थियो ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि भएको भन्दै घिमिरेले सामूहिक खेतीमार्फत ठूलो परिणाममा उत्पादन र त्यसलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले कृषिलाई बेवास्ता गरेकाले ८० देशबाट २ सय २९ प्रकारका खाद्यपदार्थ आयात गर्नुपर्ने बिडम्बना रहेको बताए । नेपालका चिया, स्याउ, आँपलगायतका उत्पादन प्रशोधन गर्न सके स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो बजार सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे । साना किसान बैंकमार्फत ६ अर्ब ११ करोड लगानी गरेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सहकारीको उत्पादन बिक्रीका लागि आफ्नै बजार नहुनाले समस्या भएको बताए । सरकारले सहकारी बजारका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा दिने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा उनले गुनासो गरे । वास्तविक किसानलाई सहभागि नगराइ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि रणनीति बनाएको भन्दै बस्नेतले विरोध जनाए ।
सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिरहेको बताए । बैंकले युवा स्वरोजगार, विपन्न वर्गलगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको भन्दै उनले उत्पादनशील कामका लागि कर्जा दिन समस्या नरहेको दाबी गरे । सहकारी ऐनका कारण पनि उत्पादन क्षेत्रमा जान समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्क्ताहरूले सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना धेरै भएपनि सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको गुनासो गरे ।
Posted by Yadav Humagain at 6:08 AM